Windows ကို 10 will be 'the last version of Windows' - သတင်း Rule
Windows ကို 10 '' က Windows ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းဖြစ်လိမ့်မည်’
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Windows ကို 10 '' က Windows ၏နောက်ဆုံး version ကို '' ဖြစ်လိမ့်မည်” အဲလက်စ် Hern ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com တနင်္လာနေ့ 11 မေလအပေါ်များအတွက် 2015 10.30 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Windows ကို 10 Microsoft ရဲ့သျှင် operating system ကို၏နောက်ဆုံးအဓိကလွှတ်ပေးရန်ဖြစ်လိမ့်မည်, ကုမ္ပဏီမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအလုပ်အမှုဆောင်အညီ.
ဗားရှင်းအသစ်ကဒီနွေရာသီပြန်လွတ်လာပြီးတာနဲ့, အနာဂတ် updates များကိုတစ်ဦး "ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောထုံးစံ" တွင်လာကြလိမ့်မည်, ကုမ္ပဏီကအတည်ပြု.
ချီကာဂိုအတွက် Microsoft ရဲ့စက်နှိုး conference မှာ Speaking, ပြုစုသူဧဝံဂေလိဆရာဂျယ်ရီနစ်ဆင်ကပြောပါတယ်: "အခုကျွန်တော်တို့က Windows လွှတ်ပါတယ် 10, ကြောင့် Windows က 10 Windows ကို၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်, ငါတို့ရှိသမျှသည်နေဆဲ "က Windows 10 ရက်နေ့မှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေ
အနာဂတ်က "ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ် Windows ကို" ၏တစျခုဖွစျလိမျ့မညျ, Windows ကိုအပြီးသတ်လွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူ 10 လိုအပ်သောအဖြစ် updated ခံရ, အစားလာမည့်အဓိကပေးဆောင်-များအတွက် update ကိုများအတွက် features တွေကိုပြန်ကိုင်ပြီးထက်.
Windows ကိုအကြောင်းစက်နှိုးမှာ "လတ်တလောမှတ်ချက်များ 10 Windows ကိုဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်ကိုအပ်လိမ့်မည်လမ်းရောင်ပြန်များမှာ, တစ်ဦးဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောထုံးစံ၌အသစ်သောဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့် updates များကိုဆောင်ခဲ့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စားသုံးသူနှင့်စီးပွားရေးဖောက်သည်များအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်တန်ဖိုး," ကုမ္ပဏီ ကြေညာချက်ထဲမှာ Verge ကပြောသည်.
အနာဂတ်မှာ, Windows ကိုပိုပြီးနဲ့ Mac OS X ကိုတူ updated နိုင်, သေးငယ်တဲ့အတူ, အခမဲ့ updates များကိုအခါအားလျော်စွာ, သို့မဟုတ်ပင် Google ၏ Chrome ဘရောက်ဇာနဲ့တူ, သောအနိုင်နိုင်ဆိုအသုံးပြုသူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုနှင့်အတူနီးပါးအပတ်စဉ်ထုတ်ကို update.
သို့သော်ကြီးမားသော feature ကိုဖြည့်စွက်နေဆဲရောက်လိမ့်မည်, သူတို့လုပျသညျ့အခါ operating system ကိုနာမတျောကိုမပြောင်းဘူးလျှင်ပင်. Windows ကို၏အဓိကလုပ်ငန်း features တွေကိုတစ်ခုမှာ 10 desktop နဲ့မိုဘိုင်း operating စနစ်များအကြားစုစုပေါင်းပေါင်းစည်းရေးဖြစ်လိမ့်မည်, ဒါပေမယ့် - အနည်းဆုံးအားပစ်လွှတ်မှာ - သာ desktop ပေါ်မှာ devices များကိုအမှန်တကယ်ထောက်ခံလိမ့်မည်. Windows ကို 10 မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်အပေါ်, ထိုကဲ့သို့သော Xbox နဲ့ HoloLens အဖြစ်အခြားထောက်ခံပလက်ဖောင်း၏ဘာမျှမပြော, နောက်ပိုင်းတွင်အချို့အချိန်ရောက်လိမ့်မည်, ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်.
22360	0 အဲလက်စ် Hern, အပိုဒ်, computing, Microsoft က, သတင်း, နည်းပညာ, Windows ကို
← CRISPR: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ DNA ကို '' အဆင့်မြှင့်တင် 'ဖို့ကောင်းတစ်ဦး idea က? Android Wear 5.1 ဆန်းစစ်ခြင်း →